The Ab Presents Nepal » ४ सन्तानकी आमासँग विवाह गर्नका लागि ९ वर्षकी छोरीको अपहरण!
४ सन्तानकी आमासँग विवाह गर्नका लागि ९ वर्षकी छोरीको अपहरण!
२२ जेठ, काठमाडाैँ -: भारतमा ४ सन्तानकी आमासँग विवाह गर्नका लागि एक व्यक्तिले उन्कै ९ वर्षकी छोरीको अपहरण गरेका छन् । विवाहका लागि दबाब दिन बालिकाकाे अपहरण गरेकाे खुलेकाे छ । मंगलबार यो घटनाको खुलासा भएसँगै पुलिसले सय बढी सिसिटिभी फुटेज अनुसन्धान गरेपछि १२ घण्टाभित्रै अपहरणको घटना फर्दाफास भएको हो ।
जून २ तारिखमा बालिका घर नजिकैको पसलमा अण्डा लिन गएकी र लामो समयपछि पनि छोरी घर नफर्केपछि आमाले पुलिसमा उजुरी गरिन् । उजुरीपछि पुलिसले वरिपरिको सिसिटिभी फुटेज अनुसन्धान गर्दा कमलेश नामका एक व्यक्तिले बालिकालाई फकाएर आफूसँगै लगेको पत्ता लाग्यो ।
स्रोतका अनुसार केही दिनअघि कमलेशलाई बालिकाकी आमाले घरको मर्मतका लागि बोलाएकी थिइन् । कमलेश दैनिक ज्यालादारी गर्ने एक मजदुर हुन् । उनी युपीमा बस्छन् । पीडित महिला चार सन्तान छन् । आरोपी कमलेशले उनकी सबैभन्दा कान्छी छोरीको अपहरण गरेका थिए । पक्राउ पछि आरोपीले महिलालाई विवाहको प्रस्ताव राखेको र उनले अस्विकार गरेपछि त्यसको बदला लिन उनकै छोरीको अपहरण गरेको पुलिसले जानकारी दिएको छ ।